Blessings in Disguises from Allah…ယုံကြည်ကြသူတို့ အသင်တို့ အဆိုးဟု ထင်ကြသော အရာများသည်လည်း အသင်တို့အတွက်အကောင်းဖြစ်တန်ရာ၏ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လူကိုလူခြင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ
International reporters should highlight the suspected assassination of the RFA Reporter Ko Moe Thu Aung @ Wai Phyo Han and demand for the setting up the independent International Investigation team »
Blessings in Disguises from Allah…ယုံကြည်ကြသူတို့ အသင်တို့ အဆိုးဟု ထင်ကြသော အရာများသည်လည်း အသင်တို့အတွက်အကောင်းဖြစ်တန်ရာ၏
Blessings in Disguises from Allah…ယုံကြည်ကြသူတို့ အသင်တို့ အဆိုးဟုထင်ကြသောအရာများသည်လည်း အသင်တို့အတွက်အကောင်းဖြစ်တန်ရာ၏။
I had readamodern Russia Solialist version of Cinderella where step mother pressured her own daughter to work in the house, restrict the food and forced to learn and get good marks. But STEP-daughter was allowed to eat all good food as much as she like, just allow to play/waste time, never allowed to help/work, never scold if lazy to go to school/learn/fail to do home work….Just imagine…own daughter thin (not fat), clever with all the house works/handicraft, learnt wise girl…Cinderella became FAT, lazy, don’t know any work and stupid…
Kyaw San‘s status.
နိုင်ငံသားတွေကို အကာကွယ်ပေးတာ နဲ့မျက်နှာသာပေးတာမတူပါ။
မအောငမြင်ကြောင်း မလေးတွေကို ပိုပြီးလူဖျင်းလူပျင်းဖြစ်စေကြောင်း
This entry was posted on November 28, 2013 at 6:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.